Klara Tsetkin क्रान्तिकारी - सबैले यति-मनपर्ने छुट्टी मार्च 8 भन्छिन् कि जंगली क्लारा सुने छ। यो महिला को जीवनी व्यक्तिगत जीवन इतिहासकारहरूले बीचमा र मात्र विवाद कारण।
क्लारा विस्तृत जीवनी - अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलन को एक इतिहास। क्लारा Zetkin, जीवनी, मार्च 8, यौन क्रान्तिको र आधुनिक समयमा एक महिला को छवि - यो सबै यस लेखमा छलफल गरिनेछ।
यो केटी जन्म भएको थियो, née Eisner, सक्सोनी मा 1857 मा उन्नत को एक परिवार मा पाँचौ बच्चा। बुबा, Gottfried, लिपजिग मा organist रूपमा पेसा छोडेर एउटा सानो सहरमा Weeden थियो। त्यहाँ एक पल को लागि, उहाँले बाख अंग नै मा प्ले गर्न सकिएन। सँगै आफ्नो पत्नी छ Josephine संग, त्यो स्कूलमा शिक्षकको रूपमा काम र स्थानीय लूटेराण चर्च मा एक सरल शरीर प्ले।
क्लारा सुधार पाँच मध्ययुगीन नायक को मूर्ति थियो, inquisitorial जलेको मा Yan Gus जलाए। हृदय द्वारा नौ वर्षको केटी मा र शेक्सपियर सिकाउनुभयो होमर भन्नुभयो "Iliad द्वारा।"
Augusta श्मिट, लिपजिग मा कुलीन महिला शैक्षणिक स्कूल को मालिक क्लारा देख्यौं। आज हामी अगस्तस उनको एक छात्रवृत्ति दिनुभएको भन्नुहुन्छ। मुक्त गर्दा अध्ययन गर्न र यस विद्यालयबाट स्नातक धेरै प्रतिष्ठित थियो। को headmistress क्लारा अध्यापन को तारा हुनेछ पक्का थियो। तर हाय, त्यो एक स्टार भयो, तर फरक नक्षत्र मा।
Osipu Tsetkinu - क्लारा नाम आफ्नो नागरिक पति प्रेम लागि केवल परिवर्तन भयो। तीस Osipov, एक रूसी emigre संग, क्लारा सामाजिक-लोकतान्त्रिक सर्कल को एक गोप्य बैठक मा भेटे। त्यहाँ मानिसलाई र काम वर्ग को मुक्ति आन्दोलन गर्न उनको प्रेम थियो।
1880 मा, जर्मन प्रहरी Osip पक्राउ। वाक्य - देश छोड्ने। उहाँले फ्रान्स गए, र दुई वर्ष पछि क्लारा परिवार फाले र पेरिस उहाँलाई साथ दिए।
जीवन एक अवधि, क्रान्तिकारी गतिविधि, प्रेम र भक्ति पूर्ण। हामी गरिब थिए। त्यो जर्मन सिकाउने moonlighted छ Ossip र क्लारा, अनुवाद कमाए। तथापि, कहिल्यै पनि एक गर्भवती क्लारा सामाजिक लोकतान्त्रिक संघ को एक बैठक छुट्यो। यो अवधिमा उनले दुई छोरा जन्म दिए, क्रान्तिकारी सिद्धान्त अध्ययन र सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी को राजनीतिक दृश्य मा एक प्रमुख आंकडा भयो।
मेरुदण्ड रोग देखि 1889 मा Osip मृत्यु हुँदा पेरिस अवधि समाप्त भयो।
उनको छोरा बाँच्न बल मैक्सिम र हड्डी दिनुभयो। "म सक्दैन - अवस्थित छैन!" - यो ती कठिन वर्ष मा उनको आदर्श वाक्य थियो, त्यसैले छोराछोरीलाई क्लारा Zetkin बताए। जीवनी आदर्श वाक्य पुष्टि गर्छ। त्यसै वर्ष मा त्यो महिला अधिकार को लागि लड्न आवश्यकता मा आफ्नो प्रसिद्ध बोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी कांग्रेस मा प्रदर्शन।
जर्मनी र क्लारा Zetkin
जीवनी आगोको क्रान्तिकारी, उपनाम जंगली क्लारा चाव को लागि, उनको मातृभूमि मा जारी छ। त्यो आदर्श वाक्य फर्केर जान बाध्य छ, र अब यसलाई हुनेछ "म, काम काम, काम -! दिन र रात"। त्यो पत्रिकाको सम्पादक छ "कामदारहरूको चासो रक्षा गर्न Glyayhayt। अखबार।"
बीस-पाँच वर्ष, मे 1917 सम्म, त्यो कारखानों, गरिब को घरमा, लेख हजारौं लेख्न सभाहरूमा व्यवस्थित गर्न र तिनीहरूलाई सहभागी भ्रमण हुनेछ। र त्यो अधिकार लागि श्रम आन्दोलन र संघर्ष वार्ता गर्दा, यो blooms र धेरै सुन्दर हुन्छ!
त्यो चालीस छ, त्यो बीस-आठ थियो। त्यो - एक apolitical कलाकार - एक प्रमुख सामाजिक डेमोक्रेट, उहाँले छ। त्यो उनको अपनाए वयस्क छोराहरू (सबै साना सौतेनि भन्दा चार वर्ष पुरानो) को लागि निर्णय hesitated, तर 1898 मा, र क्लारा तथापि, आफ्नो थर परिवर्तन थिएन, Georga Fridriha Zündel को पत्नी भइन्।
विवाह सुरुमा सफल देखिन्थे। दुवै एकदम आफ्नो पेशा सफल छन्, तिनीहरूले श्टुटगार्ट एक छेउछाउको र स्विट्जरल्याण्ड मा एउटा सानो विला (वी आई लेनिन पराउँछु गर्न प्रेम को Windows देखि दृश्य) मा एक घर खरीद गर्न सक्षम थिए, र चाँडै अभूतपूर्व लक्जरी आइटम को मालिक भए - कार।
यो दरार लामो रोग क्लारा समयमा गठन भएको थियो। धेरै cataract सञ्चालन, त्यो एकदम ठीक थिएन, जो पछि - 1900 देखि, दर्शनले 1905 देखि, deteriorate गर्न थाले। सन् 1914 मा, Friedrich अवज्ञा क्लारा, युद्ध को विरोधीहरूले उहाँले अगाडि लागि स्वेच्छा।
कारण मात्र होइन त्यो आफ्नो राजनीतिक अभियुक्तहरुलाई दोषी को पति विश्वासघात क्षमा थियो, र उहाँले लामो जवान Mistress भएको थियो कि छ तापनि, उहाँले एक ब्रेक लाग्यो। तर जंगली क्लारा बदला Georg, उहाँलाई छोडपत्र दिने, तर त्यो '71 banged गर्दा।
लगभग अन्धा क्रान्तिकारी
लगभग Blinded र थकित सञ्चालन, क्लारा Zetkin को क्रान्तिकारी आन्दोलन बाट aloof बाँकी छैन। उनको जीवनी राज्य गर्न जासूसी र राजद्रोहको शुल्क मा 1915 मा पक्रन प्रमुख, युद्ध-विरोधी गतिविधिहरु संग replete छ। मानिसहरू क्लारा देखि र किनभने रोग को दबाबमा जमानत उनको सक्रिय रोकियो छैन कि जारी थियो।
पार्टी उनको विरोधी युद्ध बोली संघर्ष कारण, तर क्लारा खुसी छ - यो कुराको बाक्लो छ। 1920 देखि, त्यो Reichstag मा कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिनिधित्व। 1932 देखि, हिटलर सबै leftist दल प्रतिबन्धित शक्ति आउँदा, सोभियत संघ गर्न ू निर्णय गरे। यहाँ त्यो गर्मी शिविर उपस्थित। पछि श्रृंखला मा, पुस्तक ZHZL हन्ना Ilberg "क्लारा Zetkin। जीवनी। "
त्यो अर्कह्याङ्गेल्स्क नजिकै अस्पताल बसिरहेको थियो, 1933 मा मृत्यु भएको Kremlin पर्खाल नजिक गाडे।
"एक महिला - पुरुष प्रकारको एक व्यक्ति," क्लारा Zetkin भने
संक्षिप्त जीवनी आगोको र समर्पित क्रान्तिकारी को छवि हामीलाई ड्र। तर प्रस्तावित परिवार मान को संरक्षण संग व्यावसायिकता संयोजन, आज एक व्यापार स्त्रीको छवि थाहा महिलाहरु हैरानी हुनेछ, र Klaroy Tsetkin तर्क।
त्यो पहिलो feminists को जस्तो थियो र अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको को उत्सव स्थापना संग जम्मा गरिएको छ। दोस्रो महिला सम्मेलन मा क्लारा भाषण हुनत - 1910 मा कोपेनहेगन मा समाजवादी महिला एक सानो रोमान्टिक थियो। त्यसपछि त्यो महिला आफ्नो अधिकार रक्षा गर्न माग गर्नेछ एक विशेष दिन को चयन लागि मतदान गर्न भनिन्छ। र सधैं शान्तिमा।
र महिला यौन मुक्ति को विचारै, क्रांति को सबै भन्दा राम्रो लडाकूको बढावा, विकास र सँगी सदस्य र क्रान्तिकारी, Klaroy Tsetkin र द्वारा प्रस्तावित रोजा लुक्सम्बर्ग, यो अलग कुरा गर्न आवश्यक छ।
उत्तर र दक्षिण कोरिया मा द्वन्द्व: सार, कारण कालक्रम। उत्तर र दक्षिण कोरिया बीच द्वन्द्व को इतिहास
हामी प्रतीक्षा र हेर्न, वा के एउटा सम्पत्ति
आणविक-संचालित icebreaker "Arktika": विवरण र फोटो। आधुनिक icebreakers वर्ग "आर्कटिक"
द्वितीय विश्व युद्ध को राइफल। सानो हतियार। Trehlineyka Mosin
के एउटा क्रान्तिमा
ए एस Pushkin, "पहिचान": एक कविता विश्लेषण
एक टो ट्रक कल गर्नुहोस्: मञ्चहरूमा को प्रकार
कसले baskak छ: यो जितेको मुलुकका कर कलेक्टर वा शान्ति अधिकारी छ?
स्कूलमा अगस्ट स्कूल बैठक: विषयहरू, रिपोर्टहरू, निर्देशक र शिक्षकहरूले प्रस्तुतीकरण
अंक आकार "Aviator" प्रवृत्ति मा सधैं छ!
"डाक्टर वेब" उपयोगिता भाइरस सफ्टवेयरको एक गंभीर प्रतिद्वंद्वी हो